Raadiyaha Ciidanka Israel ayaa sheegay in dowladda Sudan ay ogolaatay in dib loo celiyo qaxootiga… – Hagaag.com
Raadiyaha Ciidanka Israel ayaa sheegay in dowladda Sudan ay ogolaatay in dib loo celiyo qaxootiga…
Posted on 25 Oktoobar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Raadiyaha Ciidanka Xooga ee Israel ayaa sheegay maanta oo Axad ah, in dowladda Sudan ay ogolaatay in ay qaabisho tiro badan oo muhaajiriin ah oo si sharci darro ah ku galay Israel, ka dib markii ay ku dhawaaqday bilawga caadayeynta xiriirka labada dhinac.
Sida ay qortay jariidada Jerusalem Post, kumanaan muwaadin Sudan ah ayaa si sharci daro ah ku soo galay Israel 15-kii sano ee la soo dhaafay, walina waxaa jooga ku dhowaad 6,000 oo ka mid ah.
Raadiyaha ciidamada ayaa intaa ku daray in Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu damacsan yahay inuu sameeyo guddi ka shaqeeya qorsheynta dib u celinta muhaajiriinta iyo kuwa magangalyo doonka ah ee reer Sudan.
Iyada oo ka soo xigatay saraakiil sarsare oo Israel ah ayaa sheegtay intii lagu guda jiray wadahadalka ka hor inta aan lagu dhawaaqin caadeyeynta xiriirka usbuucii la soo dhaafay, ay saraakiisha Sudan ogolaadeen in la soo celiyo muhaajiriinta, iyagoo intaa ku daray in Israel ay dooneyso inay celiso inta ugu badan ee suurta galka ah.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaan xaqiijin ama beenin jiritaanka warbixintaas.
Hoggaamiyeyaasha Mareykanka, Israel iyo Sudan ayaa bayaan wadajir ah oo ay soo saareen Jimcihii ku caddeeyey in Khartuum iyo Tel Aviv ay gaareen heshiis lagu hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya.
Sidaas darteed, Sudan waxay noqoneysaa waddankii shanaad ee Carab ah ee oggolaada inuu caadi ka dhigo xiriirkiisa Israel, ka dib Masar, Urdun, Imaaraatka iyo Baxreyn.
Ka dib markii lagu dhawaaqay, xoogag siyaasadeed oo dhowr ah oo reer Sudan ayaa ku dhawaaqay diidmadooda ee caadi ka dhigista xiriirka Israel, oo ay ku jiraan xisbiyo qeyb ka ah isbahaysiga talada haya.